Ndakainyudza yekedero ndokubva ayibata akanangisa paburi rechinhu chake! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakainyudza yekedero ndokubva ayibata akanangisa paburi rechinhu chake!
Ndakainyudza yekedero ndokubva ayibata akanangisa paburi rechinhu chake!
Nyaya yedu yekutiza muZim iyi inoparira, kuno vasikana unongowona vachibatwa magaro kubasa vazhinji vanozvifarira asi vamwe havazvide. Ndainge ndavakuojaira system yekurova mababe magaro kubasa but musi uyu ndainge ndayenda ku Newscafe yepaWoodmead muno muJoburg.
Ndakanakirwa nerimwe babe so ndokubva ndakanganwa kuti hakusi kubasa ndakarisvinyanga garo musikana akaita hasha iyeye zvikanzi haaa iwee achiita kurova mawoko angu ndokubva sheee iwe kani! Iweeee, usadaroo kani iwe nekavoice kari pasi pasi, ko hapana akainge audza umwe mazitaka, saka ndainzi iwe instead of Max! Haa zemo zvarinoita soo ummm masasi mahwani apa ndainge ndanwa ma Hunters Dry akati wandei.
Ndakabva ndamuti ngatibudei pano, apa aigara padhuze zvikanzi vakomana vekuZim munozvida kana muri muno tatonzwa nekusvirwa nemaZulu nekuti imimi munenge muchitsvaga matswana.Ndakamukisa zvekuti ndakanzwa kuti ndanga ndaakuda kuisa munhu manje asi ndaisada kuti aite noise, so ndakamusimudza bva ndaita kuti ashadabure ini ndakarara nemusana, iye ouya pamusoro ndokubva anangisa ega buri rebeche rake, direct pamboro so that rhythm yekukoira anoita iye onyatsonakirwa chinyararire.
Akaigarira soo ichipinda nekudziya kwaiita beche rake yakabva yanyura yese ndobva atetsura kamhere kari kure kure” amaiii kaaanii, iweeeeee,hiiii hiii hii” anga aakuita kunge munhu arikuyimba nekunakirwa nemboro, ndakamukoirira zviri very very soft apa ndichibata matako ake ndichiavhura nekuavhara. Matits ese manje anga azara mumuromo ndichiita ekuyamwa nekuti ndoainge akatarisana neni.
Ndakainyudza ndichiyamwa matits zvekuti iye kukoira chaiko akatadza nekuti ainge akudedera nekunakirwa nemboro, achizvonyongoka aripamusoro pangu.Ndakawedzera kuinyudza mukati ndokuwedzera kukoira, ndanga ndaakuda kutunda iye akawomesa miri wake apa akasunga magaro, ndikaona manje shasha yavhura muromo wangoshama, paakauruma ndokunzwa kwamwe kamhere, teeeeete kana amaaa ahh ahh ah uum ahhh, kwanga kuri kutunda uku, iniwo ndakamukoirira ndanyatsomubata and huronyo hwake hwakaita kuti beche riwedzere kunaka.
Paakatunda achisunga beche mboro yangu yakabva yabatwa nematama ebeche ndiyewo tsaa tsaa ndichimumbundira ndobva arara akadaro pachest pangu nehope, ndakatonzwa pasina kanguva ngonono, ndokumubvisa paye ndokumuradzika zvakanaka. Ndakazomumutsa makuseni ndikati handingayende usina kundipawo morning glory, haa masasi nezvanga zvaitika manheru babe rakamuka ndokubva zvandisvira.
Thank you for reading – Comments are welcome, let us know if you want PART 2
Ndakaishwetedza ndokutanga kukazvambura nyoro, kakazvitundira nekunakirwa!
Ndakaiswa ndakanyatsovhura makumbo apa achiyamwa matits angu!
Previous articleNdakaishwetedza ndokutanga kukazvambura nyoro, kakazvitundira nekunakirwa!
Next articleNdakaipinza yese ndokutanga kumuisa patable mukitchen imomo!